Yiziphi izixhumanisi ze-backlink yebhizinisi nokuthi yiliphi inani abangayenza kusayithi lakho?
Ezweni lanamuhla le-intanethi, ama-backlink ebhizinisini asebenza njengabaholi beqembu elihloniphekile. Banikeza ukukhuthazwa kwebhizinisi e-intanethi futhi benze iwebhusayithi ibonakale kumajini okusesha. Noma yimuphi umkhankaso wokwenza injini yokusesha ungawenza ngaphandle kokwakha isixhumanisi.
Ake sicabange ngokujwayelekile kithi isimo. Uhlezi ku-bar futhi uzwa ukuthi othile ukhuluma ngawe. Uma lesi sikhulumi sihlonishwa futhi sikuchaza kahle, sikubonakalisa kahle futhi sikulethela idumela kanye negunya - black fascinators on a combine. Abantu abazwa lolu lwazi baqala ukucabanga kangcono ngawe. Futhi ngokuphambene, uma umuntu engobuhle, abantu bayenqaba ukuxhumana naye.
Emakethe yedijithali, ama-backlink avela kumawebhusayithi ahloniphekile futhi athembekile ayamukelwa njengekhwalithi. Ngokuxhuma nawe, babatshela abasebenzisi bobabili futhi basesha ibhu ukuthi bayayihlonipha lokho okushoyo noma okwenzayo. Ngamanye amazwi, lezi zinkinga zangaphambili ziba ngamavoti emithonjeni ethembekile futhi ziphakamisa idumela lakho.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngakho konke nge-backlink yebhizinisi nokuthi kungani ewusizo ekusebenziseni injini yokusesha.
Yiziphi izixhumanisi ze-backlink?
Njengoba izincomo ezivela othandekayo nakuseduze kwabantu zihlala zindlela ezithembekile kakhulu zokukhangisa, ama-backlink aphezulu wezamabhizinisi anegunya eliphakeme kakhulu ekukhuthazeni ibhizinisi online.
Esimweni sezinjini zokusesha, ama-backlink kusuka kwamanye amasayithi asebenza ngamavoti futhi atshele ngekhwalithi yomthombo wakho wewebhu. Noma kunjalo, izinjini zokusesha ziqinisekisa lokho kucabanga ku-SEO ne-PageRank algorithms.
Ngokuvamile, noma iyiphi isixhumanisi esivela kwenye isayithi kuya kwisayithi yakho ibhekwa njenge-backlink yebhizinisi. Kodwa-ke, uma lezi zixhumanisi zivela kumthombo wewebhu we-spammy futhi ophansi, ungalimaza kakhulu indawo yakho yesayithi futhi uchithe imizamo yakho yokusesha injini. Yingakho kufanele ubuke kuphela ama-backlink yebhizinisi eliphezulu.
Iziphi izici ezicatshangelwa yi-Google?
Ezikhathini zamuva, abakwa-webmasters benza iphutha kwamanye ama-backlink ebhizinisi. Basebenzisa izindlela ezahlukene zokwandisa inani lezixhumanisi zangaphandle. Ezinye zalezi zindlela zaziyi-spammy nokukhwabanisa njengokuxhumanisa ukuxhumanisa, amanethiwekhi ebhulogi wangasese, ugaxekile nokunye okunye.
Noma kunjalo, i-Google yaqaphela ukuthi ezinye zalezi zindawo zangasese azizange zizuze futhi zithembeke. Yingakho, banquma ukwenza ezinye izichibiyelo ezinhlelweni zabo zokubala, beqonda izinga lezixhumanisi zangaphandle kunezinto zabo. Ngemuva kokubuyekezwa kokugcina kwe-Google Panda, amawebhusayithi amaningi alahlekelwe izikhundla zawo.
Kuyamukelwa kabanzi ukuthi izinjini zokuhlola zihlola izici eziningana ezibaluleke kakhulu. Kulesi sihloko, sizobala izinkomba ezine ezibhekisela ekucwaningweni kwe-backlink business ibhizinisi. Udinga ukubanaka lapho usesha amathuba amasha wokuxhumanisa noma ubuyekeze iphrofayli yakho yokuxhumanisa.
Ake sibhale ezinye zazo:
Ukubaluleka kanye nomthelela
Isici esibucayi kakhulu kwi-backlink idumela. Ihlanganiswe eduze ukuze ithonye. Yingakho isikhathi ngasinye lapho ufuna amathuba omsebenzi wokuxhumanisa, qiniseka ukuthi iwebhusayithi lapho uya khona ukubeka isixhumanisi iyaziwa futhi ihlonishwa kakhulu ngabasebenzisi futhi ihlonishwa ezweni langempela.
Ukuqukethwe kwekhasi leWebhu kufanele kube nokuthile okuphathelene nebhizinisi lakho. Ama-algorithms we-SEO abheka ukufaneleka kokuvimbela amawebhusayithi aphezulu amakhono kusukela ekuqasheni amabhizinisi amisiwe.
Ukuhlola lesi sici se-backlink, udinga ukubheka abancintisana nabo. Uma umthombo wewebhu obeka ngaphandle kwe-niche yakho yemakethe usebenzisa isixhumanisi esixhumeke ngqo esihlokweni sakho, kubhekwa njenge-backlink yebhizinisi eliyingqayizivele.
Akuvami ngokwanele nje ukubeka i-backlink kwenye ikhasi lesayithi. Inombolo yabasebenzisi abachofoza kuleli khasi kuphela kuphela abanganikeza imizamo yakho ye-SEO. Yingakho uma kukhona abasebenzisi abambalwa kuphela abachofoza kusixhumanisi sakho, ukubaluleka kwayo nokuvelela akungabazeki.